Intengiso yezeMpawu | Martech Zone
Uhlalutyo, ukuthengisa umxholo, ukuthengisa nge-imeyile, ukuthengisa iinjini yokukhangela, intengiso yemidiya yoluntu kunye netekhnoloji ye-infographics Martech Zone
Khulisa iNtengiso yakho ye-E-Commerce Ngolu Luhlu lweeNgcebiso zokuThengisa eziClayo
NgoMvulo, Juni 6, 2022 NgoMvulo, Juni 6, 2022 Douglas Karr
Sibhale ngaphambili malunga neempawu kunye nokusebenza okubalulekileyo kulwazi lwakho lolwakhiwo lwe-e-commerce, ukwamkelwa, kunye nokuthengisa okukhulayo ngolu luhlu lweempawu ze-e-commerce. Kukho amanyathelo abalulekileyo ekufuneka uwathathe xa usungula isicwangciso sakho se-e-commerce. Uluhlu lweQhinga lokuThengisa i-Ecommerce Yenza umbono wokuqala omangalisayo ngesiza esihle esijolise kubathengi bakho. Izinto ezibonakalayo zibalulekile ke ngoko kutyalomali kwiifoto kunye neevidiyo ezimele ngcono iimveliso zakho. Yenza lula ukukhangela indawo yakho ukuze ugxile
I-Infographic: Ii-imeyile ezisi-7 zokuThengisa iiNtengiso eziQhelekileyo ngo-2022
NgoLwesine, uJuni 2, 2022 NgoLwesine, uJuni 2, 2022 Douglas Karr
Ngelixa itekhnoloji ye-imeyile ingenalo ulutsha oluninzi malunga noyilo kunye nokuhanjiswa, izicwangciso zentengiso ye-imeyile ziyavela ngendlela esifumana ngayo ingqalelo yababhalisi bethu, sibabonelele ngexabiso, kwaye sibaqhubele ekubeni benze ishishini nathi. IiNtengiso ze-imeyile ezikhulayo Uhlalutyo kunye neenkcukacha zaveliswa ngu-Omnisend kwaye zibandakanya: Umxholo owenziwe ngumsebenzisi (UGC) - Ngelixa iimpawu zithanda ukupolisha umxholo wazo, ayisoloko ihambelana nabaphulaphuli abajoliswe kuyo. Kubandakanya ubungqina, uphononongo, okanye ukwabelana
Iiplagi ezigqwesileyo zeeNdawo ze-WordPress zeShishini
NgoLwesithathu, Meyi 25, 2022 NgoMvulo, Juni 27, 2022 Douglas Karr
Olu luluhlu lweeplagi zam ezicetyiswayo zeWordPress zamashishini ukuphucula nokwandisa indawo yabo yeWordPress kwindawo yokuguqula engenayo. Ndiyigcina ihlaziyiwe njengoko iiplagi ezintsha zikhutshwa.
Izizathu zokuba kutheni abantu bengalandeli iibhrendi kuTwitter
NgoLwesibini, Meyi 24, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, 2022 Douglas Karr
Le inokuba yenye yezona zinto zintle ze infographics Highbridge yenziwe ukuza kuthi ga ngoku. Senza itoni ye-infographics kubathengi bethu, kodwa xa ndifunda inqaku kwi-eConsultancy malunga nokuba kutheni abantu bengalandeli kwi-Twitter, ngokukhawuleza ndacinga ukuba inokwenza i-infographic eyonwabisayo. Umyili wethu we-infographic unikezele ngaphaya kwamaphupha ethu angalawulekiyo. Ngaba unengxolo kakhulu kuTwitter? Ngaba utyhala iintengiso ezininzi kakhulu? Ngaba uthumela abantu ngokungenazintloni? Okanye ngaba
Yintoni i-Digital Asset Management (DAM) Platform?
NgoLwesine, Aprili 7, 2022 NgoLwesine, Aprili 7, 2022 UNicolás Jiménez
Ulawulo lwe-asethi ye-Digital (DAM) lubandakanya imisebenzi yokulawula kunye nezigqibo ezijikeleze ukungeniswa, inkcazo, ikhathalogu, ukugcinwa, ukubuyiswa, kunye nokuhanjiswa kwempahla yedijithali. Iifoto zedijithali, ii-animations, iividiyo, kunye nomculo ngumzekelo wemimandla ekujoliswe kuyo yolawulo lwe-asethi yemidiya (i-sub-category ye-DAM). Yintoni uLawulo lwe-Asethi yeDijithali? Ulawulo lwee-asethi zeDijithali I-DAM yinkqubo yokulawula, ukulungelelanisa, nokuhambisa iifayile zemidiya. Isoftware yeDAM yenza ukuba iibrendi ziphuhlise ithala leencwadi leefoto, iividiyo, imizobo, iiPDF, iitemplates, kunye nezinye.